5 Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee
E nwere ọtụtụ ihe ịhụnanya banyere Paris. Olee ebe ị na-amalite, nri? Ihe mbụ na-echeta bụ oké saịtị dị ka ndị eiffel tower na Louvre. Ma gịnị mere na-achọpụta zoro ezo bara nnukwu uru n'obodo? Ka anyị na-amalite na 5 Kasị Famous Okporo ámá na Paris Iji Lee!
Okporo ígwè Transport bụ ihe kasị Environmentally Enyi na Enyi Way To Travel na nke a bụ ihe mere nkena-isiokwu e dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee: Avenue Victor Hugo
Avenue Victor Hugo bụ ihe uzo nke 16 Arrondissement of Paris. malite na Charles de Gaulle (makwaara dị ka Etoile) na-agwụcha na Tattegrain (na-aghọ ụzọ Henri Martin). Ọ na-otu n'ime mmadụ iri na abụọ ụzọ amalite na Etoile, na nke abụọ fọdụrụ n'ezinụlọ nke iri na abụọ, mgbe uzo des Champs Elysees.
Aha ya bụ mgbe ama Victor Hugo, ndị nọrọ ya ikpeazụ na Hotel Particulier. A oyiyi Hugo nwere ike ike na nrutu na uzo Henri Martin. Avenue Victor Hugo bụ ma ama n'ihi na ya incredibly mara mma ije nke zuru okè maka a ukporo stroll na a oké Instagram picture! Eme ya n'ihi na gram!
Fan nke opera? Mgbe ahụ, a ma ama n'okporo ámá na Paris bụ maka gị! Nke a n'okporo ámá bụ obibi na Ụlọ ihe nkiri des Champs Elysees. The opera bụ n'ụlọ nke abụọ ebube orchestras. Ọ bụrụ na ị nwere obere mmezi oge, anyị maa nwere ike ikwu na-akwụ ụgwọ a nleta a mere ihe akụkọ arụmọrụ ebe mgbakọ. Ọzọkwa, a gbasaa na-akwanyere ùgwù n'ihi na mkpa ya na emepụta ejiji. Ọtụtụ ama ụdị pụrụ ịchọta ebe a gụnyere Vuitton, Loewe, Celine na ndị ọzọ.
3. Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee: Rue De Rivoli
Njikere esi n'ime obi nke Paris? Mgbe ahụ, a n'okporo ámá kwesịrị ịbụ na gị na ndepụta nke 5 Kasị Famous n'okporo ámá na Paris! Nke a ukwuu bi, energetic n'okporo ámá na-agba site n'etiti Paris, ẹbiet osimiri Seine. Aha ya bụ mgbe Napoleon n'oge mmeri na agha nke Rivoli, a mara mma Boulevard bụ n'ụlọ ka ndị Louvre na Tuileries Garden. Royal Obí, dị nnọọ na-esote Louvre, bụ zuru okè n'ebe na-enwe a ụbọchị na sunlit gardens. Nke a bụ zuru okè n'okporo ámá ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji jide a hụperetụ nke ochie oké ozu n'akụkụ nke Paris. Ị gaghị agbaghara ya!
4. Kpuchie amaokwu
Inweta a nkenke ọpụpụ si oke boulevards na-achịkwa ọtụtụ ndị Paris isi site fairs, The Ndeputa Couverts bụ a ọzọ mma nhọrọ. Ndị a kpuchie zụọ ahịa alleys-eme ka egwu mkpirisi site n'obodo. Ị nwere ike ịchọta quaint cafes, pubs, na oké ọnụ ahịa. Ọ bụghị nanị na, ma ije na ndị a ekpuchiri ekpuchi alleys bụ nnọọ ọmarịcha n'ihi ya, anaghị atụ uche ha!
5. Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee: Boulevard De Clichy
Montmartre E nwere mgbe ihe-atụle ga-ebe izu ike nye Paris nkà ìgwè mmadụ. dị mwute ikwu na, elu ahịa dị ka a N'ihi nke njem chugaworo ọtụtụ ndị nka n'ime dị iche iche ekwusa na. E nwere ike ịhụ nke Boulevard de Clichy nke bụ obibi na Moulin Rouge na Paris uhie uhie ìhè district. Ị ga-ahụ nightlife na ezi oge dịghị matter ihe oge nke ụbọchị ị họrọ nleta. Tụlee na ịga na Moulin Rouge ekiri a Cabaret arụmọrụ!
Na-etinye na ọkacha mmasị gị ụzọ na-eje ije akpụkpọ ụkwụ, na-esi Paris ịhụ 5 Kasị Famous n'okporo ámá na Paris! Mkpa a na-agba ịnyịnya? Chere na ị dịghị mgbe ọ ga-ajụ! Jidere a tiketi site Save A Train, ugbu a. You can book in seconds with no extra or hidden fees.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/famous-streets-paris/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#beautifulstreets europetravel longtrainjourneys trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelfrance travelparis